Muzvare Khupe Vodzinga Meya neMakanzura eMDC Alliance
Dr. Thokozani Khupe
Bato reMDC-T rinotungamirirwa naMuzvare Thokozani Khupe, nemusi weChipiri rakadzinga makanzura mana kuMasvingo, matatu kuChegutu uye mashanu kuChinhoyi kusanganisirawo meya wedhorobha iri VaDyke Makumbi vachinzi vanotsigira MDC Alliance inotungamirirwa naVaNelson Chamisa
Gurukota rezvematunhu VaJuly Moyo vatumira tsamba kuna vanamabharani vemaguta aya vachiti makanzura mana kuMasvingo uye vatatu kuChinhoyi vainge vadzingwa mabasa.
MuMasvingo makanzera anoti, VaGodfrey Kuraoune veward 4, VaDaniel Mberikunashe veward 5, VaRichard Musekiwa, veward 7 pamwe naVaTarusenga Vembo, veward 3 vaziviswa kuti havasisiri vamiriri vevagari munharaunda dzavo.
KuChinhoyi makanzura anosanganisira VaEdward Dzeka ward 9, Amai Alice Kundlande ward 11 uye VaRydes Machekera veward 2 vambomiswawo basa neMDCT. VaMberikunashe, vemuMasvingo vaudza Studio 7 kuti vatumirwa tsamba amabharani weMasvingo, VaEdward Mukaratirwa iyo yakabva kuna VaMoyo.
Amai Khupe nebato ravo reMDC vari kushandisa simba ravakapuwa nedare repamusoro kuti ndivo mutungamiriri weMDC T mushure mekupatsanurana naVaChamisa vachiriwa hutunamiri kubva pakashaya vaiva mutungamiririri webato iri mushakabvu Morgan Tsvangirai.
Mabaharani weMasvingo, VaMukaratirwa, varamba kutaura nezve nyaya iyi, asi VaMoyo mutsamba yavo vati vanopuwa simba nechikamu chebumbiro remutemo chemazana maviri nemakumi manomwe nemasere, (278) pamwe nechikamu zana nemakumi maviri nepfumbamwe (129) chinoti kana munhu
adzingwa mubato rake chigaro chinosara chisina munhu.
Kudzingwa kwe makanzura nebato reMDCT hakusi kufadza vagari avo vari kuti ndivo vakasarudza vamiriri vavanoda nekudaro vanofana kunge vanechekuita pakuvamisa basa.
Mukuru webasa musangano rinomirira vagari reMasvingo United Residents and Rate Payers Alliance, VaAnoziva Muguti, vati kudzingwa kuri kuita makanzuraakasarudzwa nevagari kunokanganisa basa mukanzuru.
Mashoko aya atsinhirwa nemutauriri weMDC Alliance, muMasvingo VaDereck Charamba. Mutevedzeri wemutauriri we MDCT, VaTapiwa Mashakada, vati havakwanisi kutipa pfungwa davo nekuti vange vari muparamende, vakavimbisa kuzotibata asi vazokundikana. Asi kanzura Kuraoune vati vacharamba vachitsigira VaChamisa.
Bato reMDCT rakadzinga makanzura pamwe ne nhengo dzeparamnende dzakawanda munyika mose richivapomera mhosva yekuramba kuenda kubandiko ravo kunyangwe vakawanda varamba vakatsika madziro.